About Us - Zhejiang Estar Farsamada Co., Ltd
Zhejiang Feiyu is Technology Co., Ltd.was la aasaasay 2004, waxay ku salaysan tahay cilmi-baarista iyo horumarinta, soo saaridda iyo sale of qiime waxyaabaha dhalista ku salaysan shirkadaha. In ka badan 20 technology R & D shaqaalaha ee hadda jira, wax soo saarka ayaa la ballaaran loo adeegsado warshadaha baabuurta, mashiinada dhismaha, warshadaha qodniinka-, seeraha biyaha iyo hydropower, mashiin soo saarta in ka badan 30 warshadaha tiir, waa in industry ee dhalista gudaha ku riyaaqay sumcad qaar ka mid ah saaraha.
Zhejiang estar injineernimada farsamada oo Co., ltd. Takhasusay soo saarka ee is cabbeeyo bushing, dhiman ridaya dhinta iyo dhiman qaybo ka ridaya, saliid Bushing sintered, giraanta syn, iyo PTFE garkooda dhalista durkiyo gashto.
Company ayaa geesinimo dib u habaynta ku shirkadaha jira ee dheeraad ah. On ku salaysan xoojinta tababarka ah oo talanti asalka ah, Company fidin qorta ee indheer bulshada, si buuxda u fulisaa hab ay maamulka casriga ah iyo istaraatijiyad suuq cusub, iyo nafteeda u sooci doontaa horumarinta mudada dheer ee warshadaha dhalista is-cabbeeyo ah. Shirkadda dadaala si ay u maareeyaan dhammaystirno nidaamka. Iyada oo ay nidaamka maamulka sare, sida shirkaddu ay ku aasaasay dhamaystiran (ISO9001 ISO / TS16949) nidaam maamul oo tayo leh oo ku salaysan siyaasadda tayada "Tayada First, Credit First iyo Kobaca Sustainable" ah, oo ay tayada iyo waxqabadka gaadhay dibada alaabta la mid ah oo horumarsan heerka. Sida mid ka mid ah shirkadaha warshadaha saa'idka si fiican u yaqaan in Jiangsu, Zhejiang, Jiashan Feiyu ayaa ah qaabka warshadaha macquul ah oo si joogto ah loo hagaajiyo awoodda wax soo saarka iyo heerka wax soo saarka. Tan iyo markii ay aasaaska ee shirkadda, waxa uu aasaasay istaraatijiyad-mashruuc horseeday horumar in si joogto ah innovate alaabta si kor loogu qaado tartan ee ganacsiga, marka lagu daro muunad-soo-saarka, dib u habaynta joogto ah iyo horumarinta ee alaabta cusub.
Si aad u sahamiyaan suuqa, ku salaysan dunida sii si ay ula kulmaan macaamiisha sii kordheysa kala duwan, baahida oo tayo sare leh, oo si firfircoon ballaariyo suuqa shisheeye iyo suuqyada caalamka. Products waa la dhoofiyo Western Europe, Ameerika iyo koonfur bari Asia ka badan 20 dal iyo gobollada. Shirkadda sii ballaarin doonto isbahaysiga warshadaha siman, la abuuro dhaqaale miisaaman, si buuxda u furo beeraha cusub, taabo faa'iidooyinka cusub ee warshadaha oo ay ogaadaan horumarinta u gaar ah ujeedooyinka ay istiraatiiji ah, iyo in la abuuro mustaqbal cajiib ah saaxiibada ka soo dhammaan qaybaha nolosha.